BatteryTop wuxuu ku tusayaa baytarigaaga iPhone-ka Apple Watch | Wararka IPhone
BatteryTop wuxuu ku tusayaa baytarigaaga iPhone-ka ee ku jira Apple Watch
Mararka qaarkood codsiyada ugu fudud ayaa ah kuwa sida ugu badan kuu anfacaya adiga maalin kasta, gaar ahaan Apple Watch. Miyaad seegi doontaa inaad ka hubin karto batterigaaga iPhone-ka Apple Watch wakhti kasta? Hagaag, waxaan kugula talineynaa maanta codsi fudud oo sidaas sameeya.
Batariga Sare Waa arjiga aan ka hadlayno. Soosaaraheeda waa Isbaanish wuxuuna u sameeyay arjigan si uu u daboolo hawl, si la yaab leh, Apple Watch uusan u lahayn asal ahaan. Waxaan ku sharaxeynaa sida ay u shaqeyso hoos.
Waan hubin karnaa batariga Aaladdayada 'Apple Watch' wakhti kasta annaga oo hoos uga siibeyna shaashadda, xitaa waan ogaan karnaa baytariga AirPods-keena markay ku xirmaan Apple Watch-geenna isla tilmaanta, laakiin ma garan karno waxa batteriga batterigayagu wuu ka tagay iPhone si kasta ha noqotee. Ama ugu yaraan illaa iyo hadda, maadaama BatteryTop ay kuu oggolaanayso inaad sidaa sameyso. Lagu rakibay iPhone-kaaga iyo Apple Watch-kaaga, markaad furto dalabka, wuxuu ku tusi doonaa ilbiriqsi gudahood wixii batari ah ee iPhone ka haray inaad ku xirtay saacadaada.
Waxay sidoo kale ku siineysaa suurtagalnimada inaad ku dhejisid cillad si aad toos ugu hesho marinka arjiga iyo shaashadda weyn ee saacadda waxaad ka eegi kartaa batteriga haray ee iPhone. Dhibaatadani kuma tuseyso batteriga haray waqtiga dhabta ah, waa inaad taabataa dhibaatada si aad u muujiso, wax ay horumariyayaashu noo sharxeen waa kiiska xaddidaadda ay Apple ku soo rogto barnaamijyada daawashada 6. Tani sidoo kale dhibaato weyn ma aha, maxaa yeelay waxay qaadataa ilbiriqsi si loo furo oo lagu tuso macluumaadka. Qiimaha BatteryTop waa € 1,09 waana hubaal in badan oo idinka mid ah in badan oo intaas ka mid ah aad raadinaysay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » BatteryTop wuxuu ku tusayaa baytarigaaga iPhone-ka ee ku jira Apple Watch